काँग्रेसमा टिकटको राजनीति : डा. शोभाकर पराजुली - Purbeli News
काँग्रेसमा टिकटको राजनीति : डा. शोभाकर पराजुली
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०२, २०७९ समय: २१:२०:४०
स्थानीय तहको निर्वाचन अव हुन्छ नै । संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पो अब टर्ने वाला छैन । निर्वाचन हुने निश्चित भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुभित्र टिकटको महत्वाकांक्षा राख्नेहरु जुर्मुराएका छन् । नेपाली काँगे्रस सत्रारुढ दल भएको हुनाले उसका दुईवटा प्राथमिकता हुन्छन् । एउटा, मुलुकभरी निर्वाचनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावण बनाउने । दोस्राे स्वयं आँफूभित्र सुयोग्य व्यक्तिलाई टिकट दिनु । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सत्रारुढ दल भएको नाताले निर्वाचन आयोगले आत्मसात् गरेको अभिष्टलाई सहयोग पुर्‍याउने हो । त्यो भनेको मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना स्वयं गर्ने र अन्य पक्षलाई पनि पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न लगाउने हो । सरकारको नेतृत्व गरेको दल भएको हुनाले उसले स्वयं निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्‍यो भने अरुहरु पनि त्यसको पालना गर्न हौसिन्छन् । जतिसुकै कमजोरी भए पनि काँग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको प्रश्नमा यो पार्टी अहिलेसम्म पछि हटेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जब जब निर्वाचन गराएको छ त्यो निर्वाचन विवादरहित भएको छ । अरु दलहरुले पनि पत्याएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले वैधता दएको छ । नेपाली काँगे्रसका प्रधानमन्त्री स्वयं चुनाव हारेका छन् र कहिले स्वयं नेपाली काँग्रेस नै हारेको छ । यसरी नेपाली काँग्रेसद्धारा गरिने निर्वाचन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार भएको छ । यस्तो निर्वाचनले राजनीतिलाई गति दिएको छ र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब्बल हँुदै गएको छ । नेपाली काँग्रेस केवल लोकतन्त्रलाई हेर्छ । उसको लोकतन्त्रभित्र राष्ट्र र जनता दुबै पर्छ । नेपाली काँग्रेस विश्वास गर्छ कि लोकतन्त्रले नै राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षागर्न सक्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग नेपालसंगको सीमा बिबादबारे खुलेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेस आफ्नै मुलुकभित्रका जनतालाई बिश्वास गर्छ । यसको गरिमा र महिमालाई मान्यता दिन खोज्छ । उसले आफ्नै जनतालाई कहिले आँप झर्‍यो, कहिले बेल झर्‍यो भनेर अपमानजनक बिम्ब प्रयोग गर्दैन । नेपाली काँग्रेस घृणाको राजनीति गर्दैन । निषेधको राजनीतिमाथि उसलाई बिश्वास छैन । स्थापनाकालदेखि नै नेपाली काँग्रेस व्यवहारमा समावेशी संगठन भएर बाँचेको छ । नेपाली काँग्रेस भू–रजनीतिक इन्द्धलाई एकअर्का विरुद्धको तुरुप बनाउदैन। बी.पी. कोइराला कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्रिका सामु लम्पसार परेनन् । न त बर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै नेपालसँग सरोकार राख्ने कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याउने काम गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस चीन विरुद्ध भारत र भारत विरुद्ध चीनको आत्मघाती खेलमा लादैन । शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त सुझबुझ एवं दुरदर्शी कुटनीतिक अभ्यासले गर्दा नेपालको बिश्वसनीयता अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बढ्दैछ । अर्थात् नेपाली काँग्रेस नै एउटा यस्तो दल हो जो आफूलाई मृत्युको मुखमा पारेर पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनु आफ्नो युगधर्म ठान्दछ । दुनियाँमा कही कतै पनि सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गराउने सरकार प्रमुख वा दल हार्दैन । तर त्यो साहस र त्याग नेपाली काँग्रेसमै छ ।
नेपाली काँग्रेसको आफ्नै भोट ब्याङ्क नेपालभरी छ । नेपाली काँग्रेसलाई मन पराउने सबै क्षेत्र र वर्गका छन् । यस्तोमा नेपाली काँग्रेसको टिकट पाउँदा कोही पनि प्रयासीलाई जित्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुन्छ । चुनावको मुखैमा अर्को दलबाट पनि पार्टी प्रवेशको चाहना राख्नेहरुलाई प्रशस्त छन् । अन्य दलबाट झ्यालबाट हाम फालेर मूल ढोकाबाट निस्कने चाहना राख्नेहरु अहिलेको चुनावी अर्थ राजनीतिले पनि लोभ्याएको छ । नेपाली काँग्रेसले हेक्का राख्नुपर्ने हो । चैते काँग्रेसीहरुलाई प्रत्याशी बनाउने कि नबनाउने ? यदाकदा टिकट बिक्रि हुने गरेको, कुनै अमूक विचौलियाले टिकटको खरीद बिक्री गर्ने गराएको आशंकाहरु आम कार्यकर्तामाझ पनि सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा पार्टीको एउटा अनुशासित सिपाही जो इमान्दार पनि छ र योग्य पनि छ, जो स्वजनशील पनि छ र सिर्जनशील पनि छ तर त्यस्तोलाई जिल्ला वा प्रदेश तहमा सिफारिस गर्ने डाडु पनिंयो लिएकाहरुले सम्भवत: किनारामा राख्न पनि सक्छन् । निकट अतितको इतिहास छ– काठमाण्डौलाई अन्तरराष्ट्रिय शहर बनाउने जुन सपना पि.एल. सिंहले देखाए त्यसलाई आजसम्म पनि कसैले उछिन्न सकेको छैन । उनले दलभित्रको श्रेणी क्रममा निकै पुछारमा रहेको भएतापनि जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएका थिए । उनको वजन आँफुलाई कतिपय हेभिवेट भनाउने नेताहरुभन्दा कम थिएन । यसले के देखाँउछ भने एउटा गतिलो कार्यकर्तालाई नगरप्रमुखको प्रत्यासी बनाउनुभन्दा एउटा झोले कार्यकर्तालाई टिकट दिन उद्यत मनोविज्ञान छैन भनेर भन्न सकिंदैन । यसलाई छिचोल्ने कसरी ?